Mashandisiro aungaita Mamepu eGoogle kunze kweiyo iPhone | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | IPhone maapplication, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kunyangwe isu tichifanira kubvuma kuti Apple iri kuita basa rakanaka nemamepu ayo nguva pfupi yadarika, isuwo tinofanirwa kubvuma kuti ichine zvimwe zvikanganiso. Tinogona kushandisa mepu dzeApple kutiudza isu nezwi zvekuita nongedzo, nenzira imwecheteyo, kuchengetedza madaro, kune izvo zviripo mune mamwe maGPS maficha senge TomTom kana Sygic. Dambudziko nderekuti tikwanise kutarisa kumamepu eApple isu tinofanirwa kuve takabatana neInternet. Ichi chinhu chisinga fanirwe nguva dzose nemukwikwidzi wayo wepamusoro: Google Mepu. Unoziva sei shandisa mamamepu eGoogle kunze kweApple?
Kufananidza kune ruvengo, asi kana tikashandisa Google Mepu hatizofanirwe kunge takabatana neInternet. Mamepu eiyo ikozvino kambani chikamu cheAlfabheti anogona kutorwa pasi, saka tinogona kuita rwendo rurefu kana kufamba kuburikidza neguta ratisingazive pasina kushandisa imwechete mega yedhata redu re data. uchishandisa Google Mepu isingaenderani kana pasina. Ndine tariro kuti Apple ichasanganisira mukana uyu mune iri kure kure remangwana, asi pandinenge ndakamirira, ndinogona kugara ndichizviita neGoogle mepu.
1 Mashandisiro aungaita Mepu dzeGoogle pasina
2 Maitiro ekudzima mamepu akatorwa kubva kuGoogle Mepu
Mashandisiro aungaita Mepu dzeGoogle pasina
Para shandisa Google Mepu zvisiri pamhepo isu tinofanirwa kurodha mepu ku iPhone yedu, chimwe chinhu chiri nyore kwazvo asi pane nzira nhatu dzakasiyana dzekuzviita. Imwe ichatibvumidza kurodha chero guta kana guta, nepo mamwe maviri achitibvumidza kurodha nzvimbo hombe. Kana izvo zvaunoda kurodha pasi rese guta kana guta, iwe unofanirwa kuita zvinotevera:
Mubhokisi rekutsvaga, tinotsvaga guta raunoda kana guta.
Kubva pamhedzisiro yatinotipa, tinosarudza iyo inoenderana nekutsvaga kwedu nekukata pazita rayo.
Izvi zvichatiendesa kumufananidzo wakawanda weguta kana guta. Tinofanira kubata zasi jena jena. Menyu ichamuka.
Chinhu chekutanga chatichaona chinotevera ichave zita renzvimbo inoteverwa nesarudzo nhatu: Sevha, Govera uye uye iyo inotinakidza, Dhawunirodha. Tinobaya kurodha pasi. Tichaona mufananidzo wakawanda wenzvimbo, huremu hwekuburitsa uye nzvimbo inowanika pane yedu kifaa.
Tinobata Download zvakare.
Tinopa nzvimbo yacho zita, kana tichida. Ini ndinowanzo siya iro default zita rinova iro zita reguta kana guta.
Isu tinobata kusevha, isu tinomirira uye, kana kurodha pasi kwapera, tichava nako. Kubva ikozvino zvichienda mberi, kana tichifamba kuburikidza nenzvimbo yakadzingwa hatizopedze data reInternet.
Nzira yechipiri zvakare yakapusa uye ichatibvumidza kurodha munzvimbo dzakakura. Tichazviita zvinotevera:
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita, nechiratidzo chekusvitsa mukati kana kunze neminwe miviri, sarudza nzvimbo yatinoda kurodha pasi.
Kana tangova nenzvimbo yese pachiratidziri, tinobata pamitsara mitatu yesarudzo.
Tevere, tinobata pa "Offline Zones".
Pachirongwa chinotevera, tinobaya pane iyo chiratidzo chiratidzo. Tichaona chifananidzo chakafanana neicho chiri mudanho 5 yenzira yapfuura. Aya anotevera matanho akafanana.
Isu tinoisa zita kunharaunda.
Isu tinobata kusevha uye kumirira kuti kurodha pasi kupedze.
Nzira yechitatu yakafanana neiyo yapfuura, asi inokurumidza. Uku kunyengera kwave kuripo kubvira Google isati yatendera kuti mepu dzitorwe zviri pamutemo. Ndezve zvinotevera:
Sezvo nenzira yapfuura, isu tinowedzera kana kudzikisa kusarudza iyo nharaunda yese yatinoda kurodha pasi.
Kana tangove nezvose zvatinoda kurodha pachiratidziri, mubhokisi rekutsvaga tinonyora "ok mamapu" pasina makotesheni. Ive nekuchengera neakagadziriswa nekuti kana tikasatarisa inozoichinjira ku "ok mamepu".
Iyo yekurodha skrini ichaonekwa. Isu tinobata pane kurodha pasi.
Pakupedzisira, tinobata Sevha zvakare uye kumirira kuti kurodha pasi kupedze.
Pane imwe nguva panguva yekurodha pasi, zvisinei nenzira yatakashandisa, iko kunyorera kunotinyevera izvozvo mepu dzinopera. Izvo hazvina kumboitika kwandiri, asi ini ndinofungidzira kuti yambiro inoreva kuti migwagwa inogona kuchinja nguva nenguva. Ini zvakare handina chokwadi kana kana vapera hatichakwanise kuzvishandisa, asi izvi zvine mhinduro iri nyore: nguva yakatarwa isati yasvika, tinopinda chikamu cheZekune Nzvimbo dzisiri paInternet tochigadzirisa.
Nenhanho idzi iwe waigona shandisa Google Mepu zvisiri pamhepo pasina kukosha kwekubatana neInternet.
Maitiro ekudzima mamepu akatorwa kubva kuGoogle Mepu
Kuchenesa mepu dzakadhindwa kubva kuGoogle Mepu zvakare zvakareruka kwazvo. Tichazviita zvinotevera:
Tinobaya pamitsara mitatu kuti tione sarudzo.
Tinotamba munzvimbo dzisiri Offline.
Tinobaya pane inoisa icon.
Isu tinobata pamepu yatiri kuda kudzima.
Pakupedzisira, tinobata Delete zvakare.
Zvandinofunga zvinoshaikwa kubva kuGoogle Mamepu neApple mepu ndeyekuti madhairekisheni hatina kupihwa mumifananidzo ichiripo, kana isiri kufamba uye munguva chaiyo seTomTom kana mamwe mashandisiro eGPS. Ndiri kusainira iyo yangu iOS 10 chishuwo chinyorwa.
Wakadzidza here shandisa Google Mepu pasina Indaneti pa iPhone?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Shandisa Google Mepu zvisiri pamhepo uye usashandise yako rate data
Wow, ndanga ndichishandisa Google Mepu kwenguva yakareba. Inguva yekupedzisa isingaenderane chinhu.
Ndatenda neruzivo. Mubvunzo mumwe, uye imepu inogara nzvimbo yakadii? Iwe unoziva, semuenzaniso, iyo mepu yeSpain yaizogara zvakadii?
Uye chii chinosanganisira kutamisa mifananidzo yandisina kunzwisisa, unogona kuitsanangura ndapota?
Zvakanaka, ndinofunga raizotora yese yeSpain yayo makumi matatu nemaviri gigabytes… zvinova ndizvo zvairi kukumbira (yese yeSpain)… asi handizive kana ichavhura kana kudzika magigabytes!
Mhoro. Zvakanaka, ivo vanotora yakawanda. Ini ndinofungidzira imhaka yekuti vane ruzivo rwakawanda kupfuura mamwe mamepu eGPS, asi nzvimbo diki inorema ingangoita 200mb.
Yese Spain haikuregi iwe utore. Iwe unofanirwa kutora machunks. Sezvaunosvika padhuze, panouya poindi inogona kuve kota yenyika inorema 600mb.
Nekufamba ndinoreva nguva chaiyo, ndiko kuti, iwe unoona museve uchifamba pamusoro pemepu. Aya marudzi emamepu anokuratidza pikicha ine mirairo, asi haifambe.
«Nekufamba ndinoreva nguva chaiyo, ndiko kuti, iwe unoona museve uchifamba pamusoro pemepu. Aya marudzi emamepu anokuratidza pikicha ine mafambiro, asi haafambe. »
Iwe unorevei neizvi, kuti isu tinogona kungozviona semufananidzo? hakuzovi nemuseve unofamba here?
Mhoro, gorkapu. Mamepu, zvirinani nhasi, haasi eGPS zvinoshandiswa. Chishandiso cheGPS chinoratidza mepu, poindi dzekufarira, uye zvimwe zvishoma zvinhu, semamhanyisa kamera. Mamepu, seaya anobva kuGoogle kana Apple, anopa rumwe ruzivo, senge zvivakwa nemaawa avo ekuvhura, zvivakwa, nezvimwewo, asi "hazvisi zvekufamba", mumakotesheni. Kana iwe ukashandisa iyo TomTom kana imwe GPS yekushandisa application, iwe unoona katatu (kana mota yaunomisa iyo) inogara yakatwasuka uye mepu inofamba munguva chaiyo sezvaunofamba. Iyi yehupenyu haipo pamamepu, asi iwe unogona kuona pikicha yezvaunofanirwa kuita pane imwe neimwe poindi. Zvakafanana, asi hazvina kufanana.
Sezvo NOKIA iri mukutendeuka: Apple haina kufunga nezve kutenga HERE?
Mamepu avo ndiwo akanakisa uye vanoshanda kunze kwenyika senge mutyairi wemotokari ... kana, dzimwe nguva, zvirinani (ndinotaura izvi kubva pane zvakaitika kwandiri)
Ivo vakatosaina Ari Partinen zvekuti makamera eiyo iPhone aive padanho rePureView yeNokia, yaive yakanakisa.
Ivo vanogona ikozvino kuita chimwe chinhu chakafanana nemamepu avo ekunze offline
Pindura kuna A
Mhoro. Mamepu eNokia aive akanaka kwazvo. Muchokwadi, ivo vaive nekodzero kune mamwe mepu akakosha (kubva kuTeleatlas kana Navteq, ini handicharangarira), asi nematambudziko ese ekusaziva kukwira mafungu avaifanira kuitengesa. Ivo vangave sarudzo, asi ivo vakatengwa neboka rezvimota zvemota, handizive kana Audi yaive pakati pavo.
Matambudziko eApple nemamepu avo haasi nemamepu pachawo, nekuti anopiwa naTomTom. Dambudziko rako kutsvaga kupfuura zvese. Kana ikapa mitsva yekutsvaga yakanaka, iine zvishoma zvishoma, senge yekuwedzera chaiyo-nguva yekufambisa (izvo zvandisingafunge kuti zvakaoma chaizvo kuita, sezvo tichigona kuzviita netsoka) uye nekutendera mamepu kuti atorwe, taizove kushanda kukuru. Tichaona zvinoitika, asi ivo vanofanirwa kutipa chimwe chinhu senge Nokia yakaita makore 7 apfuura.
Kutenda mamamepu, Google Info chishandiso chakakura uye zvinoshamisa nezvimiro senge mepu dzepamhepo. Ndiri kunyatso kunakidzwa neiyo offilene chimiro.
Ini ndinofunga Google Mepu inoda kubatana uye nekutenda kwauri ndakaiwana isingaite, ndatenda.
Pindura kuna Aintzane
chinyorwa chakanaka. Nemamiriro ekunze, ini ndinofarira uye ndinonakidzwa neGoogle Mepu zvisiri pamhepo.